Indlela yokukhawuleza ukunciphisa ubunzima kubantwana
Ukugqithisa okugqithiseleyo ekuzaleni okanye ukukhuluphala, yenye yeemeko ezingathandekiyo kubantu abadala, kodwa, ngelanga, namhlanje yintoni ingxaki eqhelekileyo kubantwana. Kwiincwadi zonyango, ukukhuluphala kuboniswa nje ngokuba ukuqokelela kwamafutha omzimba ogqithiseleyo.
Ngokuphathelele ukukhuluphala kunokuthi kuthi kwimeko apho ubunzima bomzimba buninzi ngaphezu kwama-32% weoli efaka abafana kunye no-25% kumantombazana. Kodwa nangona kunjalo, ukugqithisa komntwana kudla ngokuqhekeza njengophula umlinganiselo wesisindo / ukuphakama, ukugqithisa ubunzima bomzimba obugqibeleleyo ngo-20%, ubungqina obuchanekileyo bokunyuka ngokweqile, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekukhunjini kwesikhumba.
Ingxaki yobunzima obunzima .
Akunabo bonke abantwana abanondliwa kakuhle kwixesha elizayo ukuba babe ngabantwana abakhulileyo, kwaye awanabo bonke abantwana abahlambulukileyo, i-dock ekudala kunye nengxaki yokukhuluphala. Kodwa musa ukuphumla, kunye nobudala, ukunyuka ngokweqile kwenyuka kubo bobabini abasetyhini kunye namadoda, kwaye kunokwenzeka ukuba ukunyanya, kubonakaliswe kwasebuntwaneni, kuya kuhamba kunye nawe ekupheleni kobomi.
Isisindo esinyanisiweyo kunye nokukhuluphala kunika umntwana iingxaki ezininzi. Kuphela nje kubangelwa ubuntwaba obuntwaneni beminyaka yobudala ubudala, kuseyona nto ebangela ukuba ingcinezelo yengcinezelo yabantwana, ibuye ihambelana ngqo nesifo sikashukela seBakala II, inyuse ingozi yesifo senhliziyo yesifo senhliziyo, kaninzi igalelo ekunyanyeni kokuxininisa ngokubambisana, iphinde ihloniphe kwaye ichaphazele ulwalamano kunye oontanga. Ngokwezinye iingcaphephe, iziphumo ezibi kakhulu zokunyanyisa kukungxaki ngqo kwengqondo kunye neentlalo.
Ngoko ke, ukuba uqaphela ukuba ubunzima bomntwana wakho bugqithise isiqhelo seminyaka yakhe, ngoko kufuneka ucinge malunga nokuthatha amanyathelo okulahlekelwa ubunzima obunzima bomntwana. Ngoko ke, sinqumle ukunikezela eli nqaku kumbuzo: ukukhawuleza ukuthwala ubunzima kubantwana.
Njengobungcipheko kubantu abadala, ukukhuluphala kwabantwana kuyashukunyiswa yizona zizathu ezibangela, kodwa eziphambili zazo zingabonakali phakathi kwamandla okuvelisa (iikhalori ezithathwe ekudleni) kunye nokutshabalalisa (iikhalori ezisetyenziswe kwinkqubo ye-metabolism esemqoka kunye nomzimba). Ukunyaniseka kubantwana kubande kakhulu kwaye kuya kuba ngumphumo wokusebenzisana okunzima kwezengqondo, ukutya, izifo kunye nezinto ezizuzisayo.
Kwimeko apho ngexesha loviwo lomntwana wakho, ugqirha wagqiba ukuba ukunyamezela akubangelona sisiphumo sesifo, kufuneka acebise unyango lwezonyango njengendlela ephezulu yokonyango. Kanye kunye nalokhu, ngenxa yesiphakamiso sesondlo esifanelekileyo sokutya, kuya kubakho ukuqhuba uviwo olupheleleyo lomntwana kwiziko lezempilo. Iphuzu elibalulekileyo lihlala libonisana nogqirha wezilwanyana.
Enyanisweni, ukulahlekelwa ubunzima kubantwana akulula, kodwa kunokwenzeka.
Sinikela ngemigaqo-siseko yokutya kwindleko yokulahleka kwezingane:
1) umxholo wekhalori we-calories yokutya kwansuku zonke kufuneka unciphise ngo-20-50% (oku kuya kufumaneka ngokubandakanya inani elikhulu lokutya okwikhalori ephantsi);
2) inani lesidlo linyuka ukuya kuma-5-6 ngamaxesha;
3) kodwa isidlo akufanele sibe ngaphezu kweeyure ezingama-3 ngaphambi kokulala;
4) kubalulekile ukufundisa umntwana ukuba adle kwiincinci ezincinci;
5) kwiingcebiso zesondlo sokutya kufuneka uchithe ukukhulula iintsuku;
6) ukufezekisa nokuhlala kwisiphumo esifunyenweyo esifanelekileyo, kuyimfuneko yokwenza umzimba kunye nokutya kunye nokuzifundisa ukuqhuba ubomi obusebenzayo.
Ukukhawuleza ukulahlekelwa isisindo, sincoma iimveliso ezinjalo ukuba zifakwe kwisondlo sabantwana:
- Imifuno (iergetgettes, utamatisi, ukhukhamba, isitshalo seqanda, iklabishi, iibhontshisi,);
- Iziqhamo ezinomlinganiselo omncinci we-sucrose;
- Butter (ngaphakathi komlinganiselo);
- Imifuno enesityalo;
- Intlanzi ephantsi kunye nenyama;
- Iimveliso zobisi ezinamanzi: ushizi, ubisi, ubisi olunotyiweyo, njl .;
- Isonka sesonka.
ngexesha lokutya akukhuthazwa ukusetyenziswa:
- Inyama ebomileyo, i-pickles, ukutya okusemathinini;
- AmaSauce, iziqholo;
- I-cream, ukhilimu omuncu.
Umlinganiselo wokutya wezingane:
- Ushukela, ujoni. jam;
- Isiqhamo esihle;
- Imveliso yemifuno, ilayisi, i-semolina;
- Amanani amaninzi enyama, isibindi.
Ukutya kwabantwana kunanoma nayiphi na izinga lokunyanya ukukhuluphala kunako ukukhawulelwa kwisixa sokunxiliswa kotywala. Ngaphandle koko, kunokukhokelela ekudambisweni kwamanzi omzimba, onemiphumo engathandekiyo.
Kwisigaba sokuqala sokutya, umntwana unokuhlala ekhononda indlala, kule ngxaki, unako ukungena kwimveliso yokutya ephoswe kakhulu emzimbeni ngexesha lokutshintshwa kokutya. Kule meko, imifuno eluhlaza (zucchini, iklabishi, ithanga, ukhukhamba,) okanye amajikijolo (i-cranberry ebomvu i-currant okanye i-cherry) iya kulungeleka.
Ukuze kuhlangane neemfuno zomzimba womntwana kwiprotheni kunokunika intlanzi ephantsi kwamanqatha okanye i-fat fat boiled meat.
Ukuthintela ukukhuluphala komntwana, kuyimfuneko ukunciphisa kakhulu ubukho bee-carbohydrates (ngokukodwa umgubo kunye nezitya ezimnandi) ekudleni. Ukongezelela, kunyanzelekile ukukhokela indlela esebenzayo yokuphila.
Umsebenzi wezobugcisa .
Ukuba umntwana wakho ulandela ukutya, kodwa ingcamango yendlela yokunciphisa umzimba, ifuna iziphumo ezikhawulezileyo, sikucebisa ukuba ufunde umzimba. Ukuqhutywa kwenkqubo yokuzilolonga ngokusemthethweni okanye ukwenziwa komsebenzi okwandayo kwenza kube lula ukutshisa iikhalori ezingaphezulu, ukwandisa ukusetyenziswa kwamandla kwaye uhlale kwifomu efunyenweyo. Izifundo ezininzi ezinikelwe ekutyebeni komntwana ziye zabonisa ukuba imisebenzi yezinto ezibonakalayo ayiniki iziphumo ezibonakalayo xa zingabandakanywa nenye ifomu yokungena, umzekelo, ngemfundo yokutya okanye ngokuguqulwa kweendlela zokuziphatha. Kodwa musa ukulibala ukuba ukufaneleka kuzisa iintlawulo zezempilo ezongezelelweyo. Kwimeko apho kwanamafutha amaninzi, kunye nobunzima bomzimba womntwana alitshintshi emva kwemizuzu engama-50 yokusebenzisa umzimba u-kathathu ngeveki, uqeqesho olunjalo lugalela ekuphuculeni uxinzelelo lwegazi kunye neepayipi zegazi. Into ebalulekileyo yokukhumbula kukuba abantwana akufanele balambile baze badle iikhalori ezininzi. Ukulahlekelwa isisindo kunoma yimuphi umzimba womntwana kukuxinezeleka okungabangela izifo ezongezelelweyo kwaye kuthinte kakubi ukukhula.
Umzimba wakwamanye amazwe kwisigxina sesisu
Imiqathango kunye neentlobo zeemvavanyo zebhubhoratri zegazi kunye nomchamo
Kuthiwani xa umntwana ewela aze athawule intloko?
Unyango lwe-hernia yomntwana kumntwana
Iphupha lomhla womntwana omncinci. Iingcebiso kubazali
Imisebenzi ebonakalayo kunye nokulungiswa kwabo kubantwana
Isaladi ye-melon kunye ne-ikhabethe
Ngaba kukho inkohlakalo kumntu okanye iliso elibi?
I-curry ebomvu evela enkukhu ngeyinaninate
Umtshini wanika uJeanne Friske indlu yokuhlala e-Miami nge $ 1 yezigidi
I-sauce yokudibanisa ezisixhenxe
Amakhowe aseMhlophe amhlophe: zokupheka zokutya kunye neBorovik
Inkukhu yesibindi i-cognac
Indlela yokwenza umquba womnyaka omtsha ekhaya
Hydrotherapy ukuphucula ukujikeleza kwegazi
Ukubulisa ekugqibeleni-2017 kubafundi beeklasi eziyi-9 ne-11, ootitshala nabazali babo
Ukususwa kwamatye kwifenitshala ephakanyisiweyo
Inyama kwi-sauce enomso nelomuncu, iresiphi enomdla ngoFebruwari 23
Igalelo elimnandi kwiipeaches
Ukunciphisa emva kokubeletha